Iri gomba rakatorwa mifananidzo neNASA chaizvo iri plasmoid: Martin Vrijland
Iri gomba rakatorwa mifananidzo neNASA zvechokwadi iplasma plasmid
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa3 November 2019	• 4 Comments
Mune yangu munguva pfupi iri kuburitswa bhuku, pakati pezvimwe zvinhu, ini ndichataura nezve zvakasikwa sezvatinofunga isu tinozviona. Izvi zvinosanganisira chirevo che 'nhema magaro'. NASA ichangoburitsa "mufananidzo" wegomba dema. Muvhidhiyo iri pasi apa iwe uchatsanangurwa kuti gomba dema iri pamwe plasma plasmid. Izvo zvakakosha kutarisa vhidhiyo uye zvakare mamwe mavhidhiyo kubva muchiteshi 'Iyo Thunderbolts Project'kutarisa. Zvimwe nezve bhuku rangu mukati ino yapfuura post. Munguva pfupi inotevera ndichaendesa chaiyo zuva rekutumira.
Kufunga kuti mimwe mitemo yechisikigo inoshanda mukati mekudenga sezvatinozviona, zvakakosha kuti tidzidze dzidziso dzaEmanuel Velikovsky. Iyo Thunderbolts Project nemasayendisiti David Talbott naWal Thornill, yakawedzera kutsanangudza dzidziso yeVelikosvky uye pamusoro peichi chikonzero kunouya nekutsanangurwa kwakaringana nezve kwayakatangira mapuraneti, kuumbwa, kupisa uye mamiriro emapuraneti. Izvi zvinodaro nekuti vanofungidzira kuti mukati meyekudenga dzinoonekwa kwete mari yemagetsi chete, asiwo magetsi emagetsi. Muchidimbu, mapuraneti anotemwa nemagetsi. Kana vakaswedera pedyo nemumwe, tsvina inoitika kazhinji, kuti plasma iumbike.
Mumuenzaniso wazvino wekufungidzira kwezvakasikwa, maburi matema anobva pane dzidziso yaEinstein yekudzokorora kweukara, pasina kufunga kuti zvakasikwa (sezvatinozviona) zvinopomerwawo nemagetsi. Mumufananidzo weAlbert Einstein, pfungwa ye 'matema matema' yakagadzirirwa. Chinhu chinoshamisa ndechekuti maburi matema mune iyo dzidziso anogona kunge akaremerwa zvekuti anotora ese maseru uye nechiedza. Nedudziro, mwenje saka haudzoke kubva pagomba rakasviba saka haugone kucherechedzwa. Sainzi, zvakadaro, vanoti ivo vachiri kugona kuona kupenya kwakakomba gomba rakasviba saka NASA inoratidzwa mu2019 mufananidzo wekutanga wakakomba wakakomba gomba dema.
Mufungo wekuvapo kwemakomba matema kuunganidzwa kwe hypotheses uye sainzi inosimba kubata iyo hypotheses, nekuti seimwe chikamu checheni izvo zvakavakirwa pane zvinotaurwa naEinstein kudonha, dzidziso yose inotanga kupera simba.
Nekudaro, maburi matema pamwe haapo. Wal Thornhill anotsanangura mune YouTube mharidzo iri pazasi kuti izvo zvakavezwa neNASA kazhinji anogona kunge ari plasmma plasmid. Iyo plasma plasmid mafomu pakati penzvimbo dzemagetsi dzakatemerwa. MaLabhoratori bvunzo anoratidza iwo akafanana mufananidzo iwo akauyiswa neNASA semufananidzo wegomba dema.
Mumwe mufananidzo uyo NASA yakaratidza muna Gumiguru 2019 ndeye graphic komputa simulation inomiririra yeiyo foto uye saka haisi mufananidzo chaiye, asi mufananidzo.
Makomba matema aigona kukwezva uye kutora zvese zvinhu uye zvinoenderana nezvimwe zvinogona kunge zviri portals kune mamwe zvimiro. Idzi ndidzo pfungwa dzisingafungidzike, nekuti mubvunzo ndewokuti: izvo zvese zvinoyendepi?
Isu tava kuziva (kubva ku kaviri slits kuedza) izvo zvine basa chete kuburikidza nemafungiro uye izvo zvakasikwa saka zvinongovapo semhedzisiro yekunzwisisa; maonero kubva 'kuziva fomu chinzvimbo'. Iine gomba dema, chinhu chingangoerekana chisisakwanise kucherechedzwa, icho chinogona kufananidzwa nefa pixel pachiratidziro. Mimwe mitemo yemusikirwo inoshanda mukati mekufungidzira, zvisinei, uye mutengo wemagetsi mune zvakasikwa chinhu chisingaverengerwe naEinstein. Mukugadzirira bhuku, zvinobatsira kuti utarise mune izvi pamberi.
Nhoroondo yakazara-yepasi ndeyezvisina maturo kuisa vanofunga zvakakosha mumakona ediotic
Zvose zvinokanganisa uye rurimi rwechiHeberu rine Code yeiyo geometry
NASA inoshandiswa sei kuwedzera iyo yose
Tags: David Talbott, zvemagetsi, Featured, gonhi, magaro, Immanuel Velikovsky, NASA, plasmoid, Thunderbolts chirongwa, Universe, Wal Thornill, zwart, rima
Ini handingatarise kumeso kwese kwese kunoburitswa neNASA, zvave zvichiratidzwa zvakati wandei munguva yakapfuura kuti vanoshandisa mifananidzo neyevhidhiyo. Uye nezve einstein, Tesla akanzwisisa zviri nani wat
Zvirokwazvo iwe unofanirwa kugara uchiongorora zvese kubva kuNasa uye wozviongorora. Pave paine vatungamiriri vakaita saBilly Wilder naStanley Kubrick vakanyepera nyika kusvika parizvino nekugadzirisa mifananidzo yemafirimu nekunyepa. Asi hapana chaungataura nezvazvo.
Iyo Tesla coil uye inonzi Hutchinson athari yatove inoratidza kuti nharaunda yedu yepamberi ine magetsi uye saka iri mundima yesimba. Zero point simba inonakidza kutamba nayo.
« Kuuraya kaviri kwaGina naMarinus muPatie cinema Groningen
Masangano evechidiki anorira alarm pamusoro pehasha nekuti 'hanya' ndiko kushungurudzwa chaiko. »
Martin Vrijland op Robert Jensen's "Donald Trump haatendi muNew World Order" anoratidza: Jensen.nl inodzorwa kupikiswa
SandinG op Nicky Verstappen Jos Brech ari pamusoro pekugamuchira dhatabhesi reDNA rekunyepa neDNA yako online